मेकअप पारखीको लागि जापानको पाच ब्युटी प्रोडक्ट | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > मेकअप पारखीको लागि जापानको पाच ब्युटी प्रोडक्ट
आजको हाम्रो यो लेख बिसेष गरि महिला वर्गको लागि समर्पित हुनेछ। आज हामि मेकअपको सामानहरुको कुरा गर्ने छौ। जापानमा बस्नु हुने महिला मित्रहरु, हजुर पक्कै पनि जापान डेपार्ट्मेण्ट स्टोर वा ड्रग स्टोरमा गई थुप्रै ब्रान्डका मेकअपका सामानहरु देखेर रनभुल्ल पर्नु भएको होला। मेकअप थोरै होस् वा धेरै, महिलाहरुको लागि नभई नहुने बस्तु हो। हजुरलाई लाग्दो हो कि कुन चाहि राम्रो होला र जापानीहरु कुन प्रोडक्ट बढि प्रयोग गर्छन। आज हामी हजुरहरुलाई एकचोटी ट्राई गर्ने पर्ने जापानको पाच मेकअपको जानकारी गराउने छौ। हाम्रा पुरुष साथिहरुले पनि यो लेख पढेपछि आफ्नो घरको श्रीमती, आमा, दिदि बहिनी वा केटी साथीलाई मेकअपको सामान उपहार दिन सहज हुने आशा गर्दछौ। के हुन् त ति ५ लोकप्रिय सामान ?
१. डोली विंक आईलाइनर
. DOLLY WINK EYELINER 📍 tahan sehingga6–7jam 📍 hujung matanya kecil dan runcing 📍 sangat mudah digunakan walaupun baru pertama kali guna 📍 menjadi pilihan ramai kaki mekap 📍 mengandungi honey extract as moisturising ingredients 📍 Water proof dan sweat proof . RM 29.90 ✔️ . . #eyelinermurah #dollywink #dollywinkeyeliner #dollywinkeyelinermurah #dollywinkeyelinermurahmalaysia
Lolavendorsさん(@lolavendors.boutique)がシェアした投稿 – 3月 20, 2018 at 1:35午前 PDT
यो आईलाइनर अहिले निकै ट्रेण्डि छ। यो जापानकी चुबासा मासुवाका नाम गरेकी मोडेलले बजारमा लिएर आएकी हुन्। यो अहिले हरेक जापानी युवतीको लिस्टमा हुन्छ। यो दुइ कलर कालो र खैरोमा पाईन्छ। यसको खासियत भनेको निकै सानो ब्रस हो। यसले गर्दा आईलाइनरमा शेप दिन निकै सहज हुन्छ। यो एकनास गरि लाग्ने, चाडो सुक्ने भएकाले नलतपतिने, अनि सजिलै धुनमिल्ने हुनाले हरेकको रोजाई बनेको हो। यसको मूल्य लगभग १२६० यन जति पर्छ। तर ठाउ हेरी मूल्य फरक पर्न पनि सक्छ।
२. फ्यरी ड्रप्स भोलुम बर्स्ट मस्कारा
यो मस्करा जति पपुलर छ त्यति नै पाउन गारो पनि छ। यसको अत्याधिक मागले यो सधै आउट अफ स्टक हुन्छ। यो मस्करा परेलामा लगाउदा फेक परेला तासको जत्तिकै राम्रो देखाउछ। यो मस्कारा परेलाको भोलुम बढाउन र लामो देखाउन बेस्ट चोईस हो। यसको फिनिशिंग निकै राम्रो हुन्छ। परेला एक अर्का संग नटासिने हुनाले अरु मस्कराको जस्तो क्लम्प पर्दैन। जति राम्रो यसको क्वालिटी छ त्यति नै राम्रो यसको डिजाईन छ। यसको वाण्डमा भएको घुमाउरो ग्रूभले कुनै परेला छुटाउने छैन।
३. लुलुलुन फेस मास्क
#yoihakkenmanila #yoihakken #lululun #lululunph #lululunfacemasks #lululunsheetmasks #facemasks #sheetmasks #dailymask #japanfacemasks #japansheetmasks #freeshippingshopee
Yoi Hakken Manila (Good Finds)さん(@yoihakken_manila)がシェアした投稿 – 2018年 5月月8日午前4時05分PDT
यो फेस मास्क जापानी महिलाहरुमा निकै लोकप्रिय छ। दिनदिनै फेस मास्क प्रयोग गर्ने जापानी महिलाहरु यो प्रोडक्ट बल्कमा पनि किन्छन। यो मास्क्ले हजुरको अनुहारको स्किन नरम बनाउछ। यसमा भएको मोइस्चराईजरले हजुरको अनुहारको छाला नौरिश गर्नेछ। हजुरले यो मास्क फेसमा लगाएर १०-१५ मिनेट छोड्नु पर्ने छ। तेतिकैमा हजुरले रिफ्रेसिंग फिलिंग पाउनु हुनेछ। यो मास्क ७ वटाको प्याकमा आउछ। यसको मूल्य ३०० यन पर्दछ। ३६ वटाको प्याकलाई भने १५०० पर्दछ।
४. क्यानमेक क्रिम चीक ब्लश
क्यानमेक जापानको निकै सस्तो मेकअप ब्राण्ड हो। यो ड्रगस्टोरहरुमा सजिलै पाईन्छ। यसको निकै लोकप्रिय प्रोडक्ट क्रिम चिक ब्लश हो जुन लिप स्टिकको रुपमा पनि लगाउन मिल्छ। ५८० यन पर्ने यो प्रोडक्टले हजुरलाई उच्च क्वालिटीको मेकअप दिन्छ। यसको ब्लश जेल टेक्स्चरको हुन्छ। लगाएपछि यो चाडै सुक्ने हुनाले सजिलो संग लगाउन मिल्ने र न्याचुरल लुक दिने यसको खासियत हो।
५. RMK जेल क्रिमि फाउन्डेसन
यो ब्राण्ड जापानमा उच्च स्तरिय मेकअप सामान बनाउनको लागि चिनिन्छ। त्यसैले गर्दा यो मेकअप सस्तो भने हुदैन। यसको मूल्य करिब ५४०० यन जति पर्दछ। तर फाउन्डेसन भनेको मेकअपको “base भएको र सिधै हजुरको छालामा कन्ट्याक्ट गर्ने हुनाले सके सम्म उच्च क्वालिटीको प्रयोग पर्दछ। RMK फाउन्डेसन महँगो भएता पनि हजुरले पछुताउनु हुने छैन। यो प्रोडक्टको खासियत भनेको अरु फाउन्डेसन जस्तो अनुहारमा लगाउदा हेभी फील नहुनु हो। यसमा ह्यलुरोनिक एसिड भएकोले यसले हजुरको छाला मोइस्चराईज पनि गर्दछ। यसले हजुरको अनुहार स्मूद र बिना ब्लेमिशको देखाउनेछ। एक चोटी पक्कै ट्राई गर्नु होला।
अब हजुरलाई जापानी बेसिक मेकअपको सामानको जानकारी भएको हुनाले नापर्खिनु होस्। आफ्नो नजिकैको ड्रग स्टोरमा हजुरले यी सबै प्रोडक्ट सजिलै पाउनु हुनेछ। २ नम्बरको फ्यरी ड्रप्स भोलुम बर्स्ट मस्कारा चाहि पाउन गारो हुन्छ। वा अनलाईन मार्फत पनि यी सामान किन्न सकिन्छ। जापानी मेकअप प्रोडक्टको हाईपको अनुभब लिनुहोस्। अनि हाम्रो पुरुष मित्रहरु के गिफ्ट गर्ने सोच्नु भयो ?